Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Njem Nleta Ọnwụ: Njem na ebumnuche
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na-eme atụmatụ njem? Mkpali gị nwere ike ịdaba na otu n'ime igbe ndị a:
1. Nleta ndị enyi na ezi-na-ụlọ
Kedu ihe na-efu na ndepụta ahụ? Ndị mmadụ na-aga igbu onwe ha.
Njem njem nleta ọnwụ (otu ụdị njem nleta ahụike) bụ usoro nke ndị na-arịa ọrịa na-anaghị ala ala na-aga mpaghara ọzọ wee kpọọ ọrụ nke ụlọ ọgwụ ọnwụ iji nyere ha aka ịkwụsị ndụ ha. Ntinye nke "njem nleta ọnwụ" gụnyere "igbu onwe onye" na "nyere aka igbu onwe na euthanasia." Site na igbu onwe onye, ​​onye ọrịa ahụ na-egbu onwe ya.
Sterbe tourismus bụ okwu German nke pụtara njem mmadụ si mba ebe euthanasia na / ma ọ bụ enyemaka iji gbuo onwe ya amachibidoro mpaghara nke otu ma ọ bụ usoro abụọ ahụ nọ, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, nke iwu kwadoro, nke na-enye ohere nchịkwa nke ọgwụgwọ ndị a nye onye ahụ.
Medicaltù Ahụike Ọgwụ nke America na-akọwa na dọkịta nyere aka igbu onwe ya (PAS) dị ka "dibịa na-enyere ndị ọrịa aka ịnwụ site na ịnye ụzọ dị mkpa na / ma ọ bụ ozi iji nyere onye ọrịa ahụ aka ime omume na-eweta ndụ." Ọ bụ ezie na onye ọrịa na-enweta enyemaka site n'aka dọkịta - ma ọ bụ n'ụdị ọgwụ, nkuzi, ma ọ bụ ndụmọdụ - isi ihe dị na ya bụ na onye ọrịa enweghị ike ime naanị ya.